Samsung သည် Android သုံးစွဲသူများကိုအနိုင်ယူရန်၎င်း၏မဟာဗျူဟာကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ | Androidsis
Samsung သည် Android သုံးစွဲသူများကိုအနိုင်ယူရန်၎င်း၏မဟာဗျူဟာကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Samsung နှင့် Apple တို့အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုသည်မီဒီယာနှင့်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုအကြားတရားစီရင်ရေးထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရသည့်အချိန်များတွင်မမျှော်လင့်ဘဲအစွန်းရောက်မှုများရောက်ရှိခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကိုရီးယားသည်သူမ၏ပြိုင်ဘက်ကိုအသုံးပြုသူများကိုဖမ်းဆီးရန်အမြဲတမ်းစိတ် ၀ င်စားခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်တွင်ယနေ့အထိမရေမတွက်နိုင်သောသက်တမ်းတိုးခြင်းပရိုဂရမ်များရှိပြီးယခင်ကဆိပ်ကမ်းပြောင်းလဲသောအခါအိုင်ဖုန်းရှိသူများကိုဖမ်းဆီးရန်ကြိုးပမ်းမှုများရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုသိရှိခဲ့သည် iPhone ရှိသေးတဲ့ Apple ပရိသတ်တွေကို Samsung ကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်.
La စီးပွားဖြစ်အဆိုပြုချက် ကုမ္ပဏီ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်စုဆောင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးယခုအချိန်တွင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်သူတို့ကမ်းလှမ်းရန်ယခုအချိန်တွင်ပယ်ဖျက်ထားပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်သာဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုငြင်းဆိုခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏အပြုအမူကိုတွေ့မြင်နိုင်သည် ဥရောပ၌နောက်ဆုံးပေါ် Galaxy Note ကိုစတင်မိတ်ဆက်သည်ဒါကဥရောပမှာတကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။ သို့တိုင် iPhone ကိုဖမ်းယူရန်ကြိုးစားသည့်အချိန်တွင် Samsung ဘာဖြစ်သွားသနည်း။ ဤနည်းဗျူဟာများသည်အမှန်ပင်အကျိုးရှိသလား။
၏အသစ်သောမြှင့်တင်ရေး Samsung သည် iPhone ပိုင်ဆိုင်သောသူများအတွက်သာရည်ရွယ်သည်သူတို့ကိုစစ်မှန်သောပရီမီယံအသုံးပြုသူများအဖြစ်ဆက်ဆံသည်။ တစ်ဖက်တွင်ကုမ္ပဏီအနေနှင့်၎င်းတို့ကိုအခြေအနေများမရှိဘဲကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်လအတွက်ယူရန်ယူရိုတစ်လုံး၊ Galaxy S6 သို့မဟုတ် Galaxy S6 Plus terminal ၏တစ်ခုတည်းသောငွေပေးချေမှုအရပေးမည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ အကယ်၍ ထိုကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများရှိပါကကုမ္ပဏီအတွက်လျော်ကြေးပေးသင့်သည်။ မဟုတ်လျှင်၊ တစ်ကြိမ်ပြီးဆုံးလျှင်အသုံးပြုသူသည်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ နောက်ထပ် ado မပါဘဲပြန်သွားပါ, ဒါမှမဟုတ်အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာဝယ်။
တကယ်တော့ Samsung ကကတိပေးထားတဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း ဒီစီးပွားဖြစ်မဟာဗျူဟာအရ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဆိပ်ကမ်းသည်၎င်း၏လှည့်ကွက်ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့၊ ဒါကနေအကျိုးခံစားနိုင်ဖို့၊ မင်း iPhone ကိုစွန့်လွှတ်ရမယ်။ အဆိုပြုချက်မှာလက်ရှိ Apple terminal ကိုကိုရီးယားမှတစ်ခုနှင့်အစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကသင့်ကိုဘယ်လောက်ပေးမလဲ ကောင်းပြီ၊ အခြေအနေများအရ၊ Samsung သည်သင်၏လက်ရှိဖုန်းအတွက်တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီ၌သူတို့ပေးခဲ့သည့်ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ် မူတည်၍ လောင်းကြေးအဖြစ်၊ နောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ထပ်တိုးမည်ဟုရှင်းပြခဲ့သည်။ ဘယ်လိုလဲ? iFan တစ်ခုသည်ဤကဲ့သို့သောယုံကြည်မှုမျိုးရှိပါသလား။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ၀ ယ်ရန်အားပေးသောမည်သူမဆိုတွင်လည်းအပိုလက်ဆောင်တစ်ခုရှိသည်။ Google Play တွင်သင်လိုချင်သည့်အရာအားလုံးကိုသုံးစွဲရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀ သာကျန်ရှိသည်။ ဘယ်လိုအသံလဲ
တကယ်တော့ငါဘယ်သူမှသွားမယ်လို့မထင်ဘူး Samsung ကလက်ရှိဖုန်းကဲ့သို့သောအဆိုပြုချက်ကိုပြုလုပ်သည့်အတွက် iPhone တစ်ခုသာရှိခြင်းကိုရပ်လိုက်ပါ, သို့မဟုတ်ကျနော်တို့မြင်ဘူးသောယခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ iPhone နဲ့ Samsung ကဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ အကယ်၍ အသုံးပြုသူကတကယ်ကိုပျော်ရွှင်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်မဟုတ်သောသူတို့ကောအသို့နည်း။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သူတို့ဟာဒီလိုမျိုးယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်၊ အဲဒါဟာဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး၊ နောက်ဆုံးတော့ Samsung ကိုရွေးချယ်ဖို့မက်လုံးတစ်ခုပဲ၊ Android လောကမှာရှိတဲ့တခြားအလားတူအရာတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ ဈေးကွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ချက်စာအုပ်စာအုပ်ထဲကလွဲလို့မှလွဲလို့အဲဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီအတွင်းမှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးပုံစံကိုစဉ်းစားရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung သည် Android သုံးစွဲသူများကိုအနိုင်ယူရန်၎င်း၏မဟာဗျူဟာကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Note5ကိုရောင်းချခြင်းမပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်လူအများကြိုက်ခဲ့သည်
ကျွန်တော်ကတော့ Samsung အကြောင်း၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့စိတ်ကြိုက်အလွှာအကြောင်းဘာမှမကြိုက်လို့ပါ။
ဟိုဆေး GarGon ငါ ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ။ ငါ BQ ကိုပြောင်းသွားပြီ
José GarGon Yo ကိုပြန်ပြောပါ
ဘာမှမကမ်းလှမ်းဘဲနှင့်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်း ၄ ယောက်အားသူတို့၏ iPhone ကိုရောင်းချရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲရန်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်က Samsung, S4 အတွက်5သို့မဟုတ် 5s များကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ ထိုပြောင်းလဲမှုကိုသူတို့နှစ်သက်ကြသည်။ ထိုသူတို့က supet fanboys hehe: p
ခေါင်းစဉ်မှားလား မင်းက Apple အသုံးပြုသူတွေလား။ ("..Android အသုံးပြုသူများ။ ")